सुनको ट्वाइलेटको नाम अमेरिका ! - Everest Dainik - News from Nepal
बैशाख २३ । बेलायतको ब्लेनहाइम प्यालेसमा सुनको ट्वाइलेट कमोड जडान गरिँदै छ । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिल जन्मिएको उक्त दरबारको कोठासँगैको कोठामा उक्त सुनको ट्वाइलेट जडान गर्न लागिएको हो । यो कमोड १८ क्यारेट सुनको हुने द गार्जियनकाले जनाएको छ ।
इटालियन कलाकार मौरिजो क्याटिलेनको एकल कला झल्किने उक्त ट्वाइलेट ब्लेनहाइम दरबारमा हुने छ । उनको एकल कला प्रदर्शनीमा अन्य विभिन्न कलाकृति समेत रहने भए तापनि सुनको ट्वाइलेट सबैभन्दा विशेष रहने छ । यो सुनको ट्वाइलेटको नाम अमेरिका हो ।
अक्सफोर्डशायर स्थित ब्लेनहाइम दरबार विंस्टन चर्चिल जन्मिएको घर हो । ब्लेनहाइम आर्ट फाउन्डेसनका संस्थापक स्पेन्सर चर्चिलका अनुसार उक्त सुनको ट्वाइलेटको सुरक्षाका लागि पर्याप्त बन्दो बस्ती गरिनेछ । सुनको ट्वाइलेट जडान गरिने कला प्रदर्शनी आगामी अक्टोबर महिनामा ब्लेनहाइम दरबारमा हुने छ ।
याे पनि पढ्नुस किन उत्तरकोरियाले अमेरिकी विज्ञ बोलाएर आणविक कार्यक्रम रोक्ने घोषणा गर्यो ?
उक्त सुनको ट्वाइलेट यसअघि सन् २०१७ मा न्युयोर्कको गुगेनहाइम संग्राहलयले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई त्यो ट्वाइलेट उपहार दिने भनी चर्चामा आएको थियो, तर दिइएन् ।
याे पनि पढ्नुस पौडी खेल्न नजान्दा अमेरिकामा नेपाली युवकको मृत्यु